Taariikhda My Butros » Dareenkaa u horeeyaana – Usernames
Dareenkaa u horeeyaana – Usernames
Last updated: Feb. 20 2020 | 2 min akhri
On JDate, Waxaan ahaa nyfunnyguy32 ilaa aan u wareegeen mysterE32 u sabab la'aan. Waxaad dhahdaa waxaad doonaa waxa ku saabsan monikers aan doortay, laakiinse iyagu ma ay u muuqan sida dadka kale. MysterE waa cayaar ku aaddan sida erayada la isticmaalayo, cad, hadalka “qarsoodiga” iyo bilowga koowaad. Dhab ahaantii waxaan bogaadin u ku heli waqti ka waqti. Nyfunnyguy ma noqon doono magac wanaagsan oo haddii aan oo ku nool New York, laakiin, in qof dumar ah oo ku sugan Los Angeles, nin East Coast ah oo qoray wargayska comedy waa saldhig u wanaagsan in hadalka lagu bilaabo. Xataa marka waxaa mar aan loo aqoonsaday by my username at a bar Santa Monica, “Hey, Nyfunnyguy!”, waxaa ka mid muhiim u xaqiijiyey, haddii wax laga xishoodo ñ advertising aan u dhalan lahaa wax ku ool ah. Waxaan shaki ayay ku odhan lahaa “Hey, Mike1234” haddii in magacayga ahaayeen.
Waxyaabaha sida usernames iyo headlines waa qodax in dhinaca of badan oo daters online. Waxaan ula jeedaa, qofna runtii dan saabsan walax this, waxay Fali? Inteeda badan, jawaabtu waa maya. Haddii aan waa egregiously xun ama ñ ka sii yaraatee N kuwo aad u wanaagsan. Username A wanaagsan dhab bilaabi kartaa sheekaysi – Waxaan bilaabay in aan hadalka la BePatientImBlond a sabab ah in aad u. Waxaan gacan ka macaamiisha kale (kuwaas oo ku sii jiri doonaan user-Magaclaawe), oo iyaga helay war celin weyn oo ay profiles kaliya ma, laakiin Bogaadin on usernames ay sidoo.
Indha indhee dhowr xubnood darsin oo tiri inta usernames taagan. Aan badan, Runtii waxaan idinku leeyahay. All sababtoo ah ma jirto fikirka ama hal-abuur ka shaqeeya doorashada midkood. Laakiin sababta aan u tago mile dheeraadka ah? Dooro mawduuc in ay aad u jeclahay in aad. Waxaa qasab kuma aha in la yidhaahdo wax walba oo adiga kugu saabsan, ama dhab ahaantii wax adiga kugu saabsan. Just wax madadaalo. Miiqdaan fikrad ku wareegsan madaxa aad, waxaa kor ay iftiinka uga xaglo kala duwan. Fogaato ama, wax u socdaan in ay arbushin. Wax ay noqon doontaa isgarad-. Oo ah kuwa ugu fiican inta badan waa erayo ama riwaayadaha double on erayada; qaadashada yaqaan iyo taas oo kala duwan. Sida ku maqan, tusaale ahaan. Wax kasta oo aad u soo jeedin, waxaa jira punny ah, haddii aan funny, Jawaabta.
Qorshaynta City? UrbanMiff.
Oh, yimaadaan! Dabcan aad ku socoto inaad u qorto UrbanMiff! Jahannamo, Waxaan u maleynayaa inaan isticmaalka qeybiso inaan aniga qudhaydu magacaabi.
Usernames waa la yaab leh oo muhiim ah, ma sababtoo ah waxay tahay dealbreakers, laakiin sababtoo ah waxay macno tahay in aad AQOONSIGA on website ka. Maxaad qof doonayo inuu noqon TopekaTim markii uu noqon karaa JayhawksRock?
Sida nooca boldface aad u dhigaya inaad qaado tifaftirka marka aad taagan on line magalka raashinka, usernames saamayn kartaa go'aanka in uu gudaha u eegto. Wax kasta hartay siman, haddii sawirka waa celcelis, ii sheegaya in aadan socda si loo eego qof ka dhigtay in aad ku qososho isticmaalaya hal line kaliya? Si dhamaadka gacmeed Warta aad u tagto! Inta kale ee soo of waa gaysaan qeybiso qaar usernames badan halkan.
Waa maxay sababta aad weli tahay Single – Hel ka badan Waxaa